नयाँ नेपाल बनाउने दिन आयोःमाओवादी नेता श्रेष्ठ – Saurahaonline.com
नयाँ नेपाल बनाउने दिन आयोःमाओवादी नेता श्रेष्ठ
गोरखा, ५ फागुन । नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गोरखामा आयोजित वृहत कोटगढी महोत्सव २०७४ लाई सम्बोधन गर्दै जनताले बाम गठबन्धनलाई दिएको स्पष्ट बहुमतले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने दिन आएको बताएका छन् ।गोरखा निर्वाचन क्षेत्र २ बाट म विजय हुन नसके पनि देशैभरी बाट बाम गठबन्धको जीत हुनु गौरवको कुरा भएको बताए ।
अवको पाँच वर्ष भित्र देश आर्थिक समृद्धिमा अगाडि बढ्ने उनले बताए । गोरखा जिल्लाको विकासका लागि विशेषज्ञहरुको समूह बनाई छलफल गरेर गुरु योजना तयार गर्नुपर्ने नेता श्रेष्ठको भनाई छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिल कुमार श्रेष्ठले कोटगढी साच्चै पर्यटकिय स्थलका लागि उपयुक्त स्थान भएको र यसको विकासका लागि आफूले सकेको पहलकदमी लिने बताए ।
पालुङटार वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष रीषीराज धौरालीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा स्थानीय मैत बहादुर वाईवा, डम्बर बहादुर राना, प्रकाश न्यौपाने, राममाया थापा, बलराम थापा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । चौविसे राज्यकालका भग्नावशेषहरु कोटमा रहेकाले यसलाई पुरातत्व विभागले संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयहरुले बताउँदै आएका छन् । महोत्सवमा राष्ट्रिय कलाकार कहरसिं राना ,प्रमिला केसी, सम्झना थापा, सन्तोष दवाडी लगायतले आफ्ना कला प्रस्तुत गरेका थिए ।
पोखरा : पोखरा महानगरपालिकाले बुधबार सार्वजनीक विदा घोषणा गरेको छ । महानगरपालिका मातहतका कार्यालयहरु बुधबार.....